DEG-DEG: Inter Milan Oo Ku Dhawaaqay In Achraf Hakimi 24 Saacadood Kaga Tegayo - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaDEG-DEG: Inter Milan Oo Ku Dhawaaqay In Achraf Hakimi 24 Saacadood Kaga Tegayo
DEG-DEG: Inter Milan Oo Ku Dhawaaqay In Achraf Hakimi 24 Saacadood Kaga Tegayo
Kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa ku dhawaaqday in difaaceeda midig ee Achraf Hakimi uu ka tegayo 24 saacadood gudahood, uuna ku biirayo PSG oo si rasmi ah ula wareegaysa.
Agaasimaha Inter Milan ee Beppe Moratta ayaa xaqiijiyey, in saacado kooban gudahood la dhamaystiri doono kala iibsiga Achraf Hakimi ee Inter Milan iyo PSG, waxaanu qiray in wax walba dhamaadeen oo kaliya xaal-xaal yar la dhamaystiri doono saacadaha soo socda.
Hakimi oo Inter Milan ay 12 bilood ka hor kasoo bixisay 45 milyan oo Euro oo ay kagala soo wareegtay Real Madrid, ayaa la rumaysan yahay inay ku iibinayso 70 milyan oo Euro oo ay PSG bixinayso, taas oo iskugu jiraysa 60 milyan oo Euro oo qaddin kaash ah iyo 10 milyan oo Euro oo ku xidhnaan doona bandhiggiisa iyo guulaha uu gaadho.
Moratta oo la hadlay Sky Sports Italia, ayaa xaqiijiyey in marxaladdii ugu dambeeyey iyo gabogabadii uu marayo heshiiska Achraf Hakimi kaga mid noqonayo PSG, waxaanu yidhi: “Piero Ausilio ayaa ka shaqaynayay, waxaananu taaganahay heerarkii gabogabada. Waxa jira hab-raacyo caam ah oo la dhamaystirayo, laakiin waxaan u malaynayaa maalin gudaheed oo lagu dhamaystiri doonaa.”
Moratta oo hadalkiisa sii wata, ayaa yidhi: “Way caddahay in waqti xanuun badan ay noo tahay, laakiin aniga ayaa ah maamulkii oo ku qasban in aan dammaanad-qaado sugnaanta dhahqaale ee kooxdan ee xilliga adag ee guud ahaan dunidu ku jirto.
“Marka hawlgalka Hakimi lasoo gabogabeeyo, waxay noo ogolaan doontaa inaanu xoogaa nefis ka dareeno qolka, waxaananu rajaynaynaa in aanaan u baahan doonin in aanu iibino ciyaartooyo kale oo waaweyn, maadaama aanu doonayno in aanu sii wadno kooxdayada guulaha horyaalka keentay.”
Dhinaca kale, Inter Milan ayaa la sheegin in beddelka Hakimi ay u doonayso laacibka Arsenal ee Hector Bellerin ama Davide Zappacosta oo ka tirsan Chelsea.